स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व घट्ने
१० खेलाडीले क्याम्प छाडेको प्रकरण: छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ?
उपमेयरमा उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्रको पराजय निश्चित
धुलिखेलको मेयरमा पुनः व्याञ्जु
चौथो टी-२० मा नेपाल १५ रनले विजयी
हामी भेडा होइनौं
मतगणना नसकिंदै प्रतिस्पर्धीले दिए मीना लामालाई बधाई
सीके राउत मधेशको नयाँ शक्ति बनेका हुन्?
धनगढीमा ४३ हजार गन्दा स्वतन्त्रलाई साढे १९ हजार मत
शिक्षकको परीक्षामा किन फेल भए ८७ प्रतिशत?
शिक्षक सेवा आयोगले लिएको माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा (सामान्य) मा ८७ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएपछि शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठेको छ।
४५ वडाध्यक्षका लागि ६२ स्वतन्त्र उम्मेदवार
मुगुमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ।
गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले जुलूसमा आएर ‘अब जनता र पुलिस मिल्नुपर्छ, मिल्नुहोस्’ भनेर मत्थर पार्ने प्रयास गरे। तर, भीड झन् उग्र भयो। ‘जनता र पुलिस एक हो भन्छस्? मार्दिम्?’ भन्दै नाराबाजी हुन थाल्यो।
के हुन्छ संघ र प्रदेशका एक-दुई लाखका योजनाले? जनताको आधारभूत तहका काम स्थानीय सरकारले गर्न पाए ठूला विकास आयोजनाका काममा प्रदेश र सङ्घीय सरकार केन्द्रित हुन पाउँछन्। तर, अहिले प्रदेश र सङ्घीय सरकार एक-दुई लाख लिएर गाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्।
सत्यको अधिकारमा सरकारको वक्रदृष्टि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनाको निष्पक्ष, सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित परिवारजन तथा समाज समक्ष सार्वजनिक गर्ने उत्तरदायित्वप्रति सरकार शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ।
कमैया मुक्ति: बदलिएन नियति! सरकारले कतिपय मुक्त कमैयाहरूलाई वन र खोला किनारको जग्गामा ‘थन्क्याउँदा’ उनीहरू ढुक्कले बस्न पाएका छैनन्। कतिले भने अझैसम्म पनि जग्गा पाएकै छैनन्।
के गर्ने बाँझो जमीन? कृषि-अर्थतन्त्र सबल बनाउन जमीन बाँझो राखेकाहरूले जमीन नहुनेहरूलाई विना डर ढुक्कले कमाउन दिन सक्ने नीति बनाइनुपर्छ।
‘बुबा सपनामा आइरहनुहुन्छ, न्यायको लडाइँ जारी छ’ माओवादी द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका मेरा बुबाको हत्या भयो। तर, न्याय पाएनौं। हामीले जस्तो मानसिक र सामाजिक तनाव कसैले पनि भोग्न नपरोस् भनेर न्यायको लडाइँ जारी राखेका हौं।
के हो पृथ्वीको औसत तापक्रम एक डिग्री बढ्नुको अर्थ? के होला असर? भावी पुस्तालाई सन्तुलित जलवायु सहितको स्वस्थ पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न तापक्रम वृद्धि घटाउने दिशामा वर्तमान पुस्ताले विवेक खर्चिन र त्याग देखाउन जरुरी छ।
डाक्टरी पेशा र देश छाड्न बाध्य पार्ने त्यो घटना‍‍‌ अस्पतालमा घटेको एउटा घटनाले युवा चिकित्सकलाई पेशासँगै देश नै छोड्न बाध्य पार्‍यो।
धर्मनिरपेक्षता : लोकमतको अपमान हामीकहाँ धर्मनिरपेक्षता जबर्जस्ती लादेर झगडाको बीउ रोप्ने काम भएको छ।
आमामाथि सधैं अविश्वास! महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले आवश्यक कानून सहित विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्दै आएकाले केही सुधारका सङ्केत त देखिएका छन्। तर, कानूनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा महिलाले पाउनुपर्ने जति अधिकार पाएका छैनन्।
‘किशुनजीको चुनाव खर्च बचाएर फिर्ता दिएँ’ २०४६ साल अघिसम्मको बेग्लै परिस्थिति थियो, तर खुला समाजमा प्रवेश गरिसकेपछि क्रियाशील सदस्यतालाई रोक्नुपर्ने, सङ्कुचन गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण म देख्दिनँ। यसलाई खुला गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
मध्यराति खरानी भयो गमगढीको तल्लो बजार मुगुको सदरमुकाम गमगढीस्थित तल्लो बजारमा भीषण आगलागी हुँदा १७ घर जलेर खरानी भएका छन्।
यसरी सुल्झाउन सकिन्छ सर्वोच्चको विवाद अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्या प्रधानन्यायाधीशले गठबन्धन सरकारमा हिस्सा मागेका कारण मात्र होइन, संविधानले न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द राखेका कारण उब्जिएको हो।
संस्कृतिको समग्र ‘पृथकता’ अर्को सौम्य शक्ति
बौद्ध धर्मलाई भारतले आफ्नो सौम्य शक्तिको अस्त्र बनाउँदै गर्दा, चीनले सगरमाथाको प्रवर्द्धन गर्दा र वीर गोर्खालीको अर्थलाई फेरि केलाउनुपर्दा के यी शक्ति सधैं पर्याप्त छन् त भन्ने प्रश्न गरी नेपालले अन्य ठाउँमा पनि आफ्नो अस्तित्व खोज्‍नुपर्ने देखिन्छ।
सडकमा कति सुरक्षित छ सेतो छडी?
विकसित होस् या अविकसित, सबै देशमा दृष्टिविहीनको साथी बनेको सेतो छडी नेपालमा भने न सुरक्षित छ, न त सुलभ नै।
शोकमग्न मुगु, ज्यान गुमाउने अधिकांश ३० वर्ष मुनिका दशैंमा घर फर्किएका ३२ जनाको बस दुर्घटनामा ज्यान गएपछि मुगु शोकमा डुबेको छ। उनीहरूका आफन्तजन शव बुझ्न गाउँबाट हिंडेर सदरमुकाम पुगेका छन्।
दशैं मनाउन घर फर्केका ३२ जनाले गुमाए ज्यान मुगुमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३२ पुगेको छ। २४ जनाको घटनास्थलमै र आठको उद्धार तथा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।
पुस्ता होइन, संस्कार परिवर्तन पाको पुस्ताका नेताहरूबाट आश मरेपछि नेतृत्वमा युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि संस्कार परिवर्तन नभई केही हुँदैन।
गैरसांसद मन्त्री प्रकरणः संवैधानिक प्रावधानको अनावश्यक दोहन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुलाई अलोकतान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्थाको अनावश्यक दोहन भन्न रुचाउँछन्।
सर्वोच्चको फैसलापछि ह्वीप प्रयोगको अपव्याख्या
धेरै काठमाडौंबासीलाई लागेको छ–संघीयता चल्दैन! संसद्‌मा बोल्दै अधिकारीले सरकारले सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) को आडमा सरकार चलाएको बताएका छन्।
किन बढ्यो बाढी-पहिरो, कसरी गर्न सकिन्छ विपद् न्यूनीकरण? प्रकृतिसँगको सन्तुलन विनाको विकास निर्माणले विपद्को जोखिम बढेको छ। विपद् जोखिम कम गर्न सरकार र समाजको सहकार्य जरुरी छ।
अन्नपूर्ण आरोहणको त्यो ऐतिहासिक दिन आजकै दिन ३ जुन १९५० मा फ्रान्सका मोरिस हेर्जोग र लुई लाशनालले संसारमै पहिलोपटक आठ हजार मिटरभन्दा माथिको अन्नपूर्ण प्रथमको सफल आराेहण गरे। त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष ३ जुनलाई अन्नपूर्ण आरोहण दिवसको रूपमा मनाइन्छ।
अस्पतालमा भर्ना पाइएको छैन, तर अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्यो भने के गर्ने ? कोरोना संक्रमण भएर घरमै बसेको अवस्थामा अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्यो भने के गर्ने ? कतिलाई आपत् परेको हुनसक्छ। यस्तो बेला स्टेरोइड औषधि सेवन शुरू गरिहाल्न संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार, यो कोभिड–१९ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, प्राणदायी औषधी हो।
छोरा प्रकाशचन्द्रको नजरमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा एकचोटि बुवाले भनेको सम्झन्छु- ‘सबैले राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्‍ने के छ र!’ मेरा लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो।
संसद् पुन:स्थापनाको खुशियालीमा दाहाल-नेपाल समूहको विजय र्‍याली (तस्वीरहरू) प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाकाे स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दाहाल-नेपाल समूहले बुधबार काठमाडौंमा विजय जुलुश निकालेको छ।
'सार्वजनिक विषयमा चिन्ता देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन' मैले सदा गर्व गरेको छु, सर्वोच्च अदालत संविधानको पालना गराउनेमा नियमपूर्वक उभिनेछ। इतिहास साक्षी छ, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सदा संविधानको रक्षा गरेको छ।